Maxaa Lagga Barran Karaa Caydhinta Nicholas Haysom? Q 1aad Abdifatah Ahmed, | Gabiley News Online
Maxaa Lagga Barran Karaa Caydhinta Nicholas Haysom? Q 1aad Abdifatah Ahmed,
Sidda uu xusay afhayeenka Xoghayaha Qarramadda Midoobay, Antonio Guterres waxa uu aqballay in uu u soo magacaabo ergey cusub dalka Somalia ka dib markii Somalia ay caydhisay Haysom. Adeegsiga tibixda ‘Persona non grata’ iyo in aan loo isticmaalin diblomaasiyiinta qarramadda midoobay ayuu carrabka ku adkeeyay xoghayuhu. Wallow waxa laga barran karaa aanay kaliya ku koobnayn dhowr waxyaabood, hadda na waxa aan soo gudbinayaa afar arrimood. Waxa aan ugu horaysiin doonaa; a) Isticmaalka tibbixda ‘Persona non grata’ iyo in loo isticmaali karo diblomaasiyiinta UN-ta.
a) Xoghaye Guterres waxa uu yidhi haddal macnihiisu yahay ‘Diblomaasiyiinta qarramadda midoobay looma isticmaali karo Persona non grata. Sabab waxa uu kaliya uga dhigay in tibbixdu ku soo aroortay heshiiska caalamiga ah ee xidhiidhka diblomaasiyadda (Vienna Convention on Diplomatic Relations) oo ah mid kaliya ku koobban xidhiidhka diblomaasiga ah ee dhex mara labba dal. Waa maxay aragtidda cilmiga ah amma dhaqanka waaqiciga ah ee taageeraya haddalka Guterres? Qoraalka laguma xusin tafsiir dhaafsiisan in heshiiskaasi uu inta badan ka hadlo kaliya xidhiidh diblomaasiyadeed u dhaxeeya labba dal, UN-tu na aanay ahayn qarran safiir u dirta qarran kale. Marka dhan lagga eeggo tafsiir ahaan waa sax haddalka xoghayuhu, marka dhan kale laga eeggana waa mid jabban.
Horta heshiiska marka lagga eeggo ciwaankiisa waa mid suntaya dhamaan xidhiidhka diblomaasiga ah iyo hab-dhaqankiisa guud. Ma aha mid odhanaya ‘Heshiiska Caalamiga ee Diblomaasiyadda U Dhaxaysa Labba Dal’. Sidaas si la mid ah, Guterres-na ma addeegsan heshiis caalamiya amma qaanuun u goonni ah diblomaasiyiinta Qarramadda Midoobay, kana soocaya diblomaasiyiinta kale. Arrintani waxa ay tilmaamaysaa in diblomaasiyiinta qarramadda midoobay lagula dhaqmo heshiiskaas. Magaca ‘Ergay’ isna waa eray lagu qeexay isla heshiiskaa qodobkiisa 14(b) oo ah qofka labbaad marka lagga hadlayo kala sarraynta diblomaasiyiinta kuna xigga qofka lagu magacaabo ambaasadoorka.
Xoghayuhu waxa uu xusay in aan loo isticmaalin ‘Persona non grata’ diblomaasiyiinta qarramadda midoobay. Sidda aan kor ku xusnay ma aragno aragti amma qaanuun ka duwaya diblomaasiga UN-ta ka uu soo dirto qarranku. Marka laga hadlo dhacdooyinka, waxa jira dhacdooyin kale oo tilmaamaya in ‘Persona non grata’ loo isticmaalay caydhinta diblomaasiyiinta qarramadda midoobay, qarramada midoobayna ay sidaas ku aqbashay kuna baddashay. Tusaale ahaan, ergaygii UN-ta ee dalka Sudan, Jan Pronk (2006) iyo Terje Rod Larsen (2004), ergaygii xoghayaha UN-ta ee Palestine. Sidaas si la mid ah ayaa Nicholas Haysom na loogu adeegsaday, xoghayuhuna uu ku aqbalay kuna soo baddalayaa. Sidaas awgeed, waxa aan qabaa in haddalka Guterres ee odhanaya diblomaasiyiinta qarramada midoobay looma isticmaalo Persona non grata in uu yahay haddal u jabban aragti ahaan, sharci ahaan iyo waaqici ahaan ba. Fahankaygii, kaliya waxa uu u isticmaalay sidii uu u dhawri lahaa sharafka shaqaalaha qarramadda midoobay.